मेरो लिगं फेरी चुस्ना थाली - Nepali Sex Tube
मेरो लिगं फेरी चुस्ना थाली
कुरा आजभन्दा ६ महिना अगाडीको हो । म माघको २७ गते रामेछाप गएको थिए, त्यहाँ मेरो मामाघर हो र मामाको छोरीको विहे थियो फाल्गुनको २९ गते । म त्यहाँ पुगेको भोलिपल्ट एउटा गाउँको मामाको छोरी शर्मिला भन्ने केटीसँग मेरो परिचय भयो । हेर्दा सार्है राम्रो जिउडाल भएकी मुसुक्क हास्दा मलाइ सार्है उकुसमुकुस भयो उसको दुधको पोका सार्है ठूला थियो दुइ हात लाग्थ्यो एउटा समात्नलाइ । म बिहेको शिलशिलामा गएको हुनाले मलाइ अरू कुरामा खासै ध्यान गएन । र मामाले मलाइ खाना (पुलाउ) बनाउन आग्रह गर्नुभयो कारण त्यस गाउँमा कसैलाइ पनि पुलाउ बनाउन आउँदैनथ्यो । मलाइ भोज तयार गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो । खाना तयार गरिसकेपछि मलाइ अलि फुर्सद भयो र तिनै शर्मिलाको बुबाले मलाइ उहाँकोघरमा जानको लागि कर गर्नुभयो र मलाइ पनि शर्मिलासँग कुरा गर्न पाइने भएकाले म पनि जान तयार भएँ।
उहासँग घरमा पुगेपछि मैले सोचेझै उही शर्मिला मलाइ स्वागत गर्नको लागि चिया पकाएर तयार भएर बसेकी रहीछन् । मामा र म सँगै बसेर चिया खाँदै गर्दा मामाको फोन आयो र मामाले मलाइ भान्जा चिया र खाजा खाइसकेर मात्र जानुहोला मेरो बाटोको मिटिङ्गमा जानुपर्नेभयो भनेर शर्मिलालाइ भान्जालाइ राम्रोसँग खाजा खुवाएर पठा है भन्नुभयो र उनले पनि भइहाल्छनि भनिन् । अनि मामा गएपछि घरमा म र शर्मिलामात्र थियोँ । शर्मिला खाजा बनाउन थालिन् र खाजा बनाएपछि उनले भनिन चोटामा गएर बस्नु म खाजा लिएर आउँछु फोटो हेर्दै खाजा खाउँला भनिन र म पनि हुन्छ भन्दै चोटातिर लागेँ र खाटमा गएर बसेँ ।
उ पनि पछि पछि खाजा भुटेको चिउरा र दहि लिएर आइ र दाइ खाजा भनेर थाल समाउन दिइ म चिउरा टोक्दै थिए उचाँही एल्बम लिएर म छेउमै आएर फोटो हेरों भनि र म फोटो हेर्न थाले । त्यहाँ उसको एउटा ब्रामात्र लगाएको फोटो रहेछ । म त्यो फोटो हेरेर लठ्ठ परेँ किनकि त्यो फोटोमा उसको छातीको चुच्चो प्रस्ट देखिन्थ्यो । मैले उसलाइ सोधेँ यो फोटो कहिले खिचेको उत्तर आयो तिजमा खिचेको मैले अनायासनै भन्न पुगेछु यो ड्रेसमा तिमि सार्है राम्री देखिदीरहीछौ भनेँ उनी भने लजाउँदै थिइन । त्यतिकैमा मेरो हातमा एउटा लाइटर पर्यो र त्यो लाइटरमा बत्ती रहेछ ।
मैले भित्तामा बत्ती बाँले त्यसमा त एउटा नाङ्गो केटीको फोटो पो रहेछ । मलाइ रमाइलो लाग्यो र मैले सोधेँ तिमिलाइ पनि यस्तै हिरोइन बन्न मन लागेर त्यस्तो फोटो खिचेको हो भनेर सोधेको उसले हो भनेर मुन्टो हल्लाइ । मसँग पनि बहिनीको बिहेको लगि भिडियो खिच्न लगेको मुभी क्यामरा थियो मसँग, मैले भने तिमी फेरी त्यस्तै गरी बसत म तिम्रो भिडियो लिन्छु भनेको उ लजाइ । मैले नलजाउ कोही पनि छैन भने उसले मानिन र भनि मलाइ लाज लाग्छ भनि । मैले भने तिमीलाइ भिडियोमा कस्तो राम्रो देखिन्छ आफैंले हेर्नुमिल्छ भनेर सानो भिडियो बनाएर प्ले गरेर देखाएँ। त्यसपछि अरूलाइ नभन्नुहैत भनेर भिडियो खिच्न मानी र भित्र कोठामा गइ र ब्रा र प्यान्टमात्र लगाएर आइ र मैले ५ मिनेटको भिडियो खिचे सारै राम्रो देखिइन भिडियोमा । भिडियो खिचिसकेपछि उसले भित्र गएर टि–सर्ट पनि लगाएर आइ र भन्न थालि म पनि भिडियो हेर्ने भनेर र त्यतिकैमा मैले उसलाइ भिडियो देखाउन थाले र उ मेरो पछाडी आएर बसेर क्यामेरा हेर्न थालि
उ यसरी बसि कि उसको छाती मेरो टाउकोमा ठोक्काएर बसी र मलाइ कता कता बासना ले छुन थाल्यो र भने नानु तिमि अगाडी बसेर हेर भने उ एउटा दुधे बालकले झै हुन्छ भनि र खाटको मुनी मेरो भाइमा टाउकोले अडेस लागेर मुभी हेर्न थाली । मलाइ कता कता काउकुती लागिराको थियो र मैले उसको कपाल सुम्सुम्याउन थाले। मैले कपाल सुम्सुम्याउन थालेपछि उसले मलाइ हेरी मैले पनि उसको मुख हेरें उसको मुख रातो भएको रहेछ । सायद उसलाइ पनि आनन्द आएको हुनुपर्छ । उसको मुख रातो भएको देखेर मलाइ अलिकति हिम्मत आयो र हातलाइ उसको घाँटी सम्म पुर्याए । उसको कुनै प्रतिक्रिया आएन मलाइ अझै हिम्मत बढेर आयो र उसको छातीमा हात राखिदिएँ। उ जुरूक्क उठी मैले तानेर खाटमा सँगै
बसाएँ र टि-सर्ट बाहिरबाटै मैले उसको दुध माड्न थालेँ ।
एकछिन त चलमलाउँदै थिइ एकछिनपछि उ चलमलाउन छोडी र मेरो काखमा घोप्टो परी त्यसपछि मैले हात लुगाभित्र छिराएर उसको कलिलो मुन्टा चलाउन थालेँ । त्यसपछि उ पनि सलबलाउन थाली र सिक्सिकाउन थाली त्यसपछि मैले उसलाइ खाटमा उत्तानो पारेर सुताएँ र उसको टि-सर्ट पुन खोलेँ अहिले त भित्र लुगा लगाउन जाँदा उसले पहिलानै ब्रा खोलेर टि-सर्ट मात्र लगाएकी रहीछ । उसको अनारको दाना जस्तो दुध देखेर म त पागल नै भएँ । मैले बिस्तार उसको दुधको मुन्टा टोकिदिए त्यसबेला उ बोली कति बेस्कन टोकेको अलि बीस्तार गर्नु न त्यसपछि उसको कलिलो ऒठ चुसेर आनन्द लिन थाले । उसले पनि ऒठ चुस्न थालेपछि त उसको दुध मैले झन माड्न थाले । उ आ……….. ………………….आ………………….. उ………………..स………………….. गर्न थाली त्यसपछि मैले उसको योनिमा हात पुर्याएँ उफ्भ र्खर पलाएका भुत्लाहरूको बिचमा हात पुर्याए उसको पनि छिपछिप हिलो भैसकेछ ।
त्यसपछि उसको पाइन्ट मैले खोलिदिए र उसले रातो प्यान्टी लाएकी रैछ । त्यो पनि फुकालीदिएँ अब म हेरेको हेर्यै भए म उफ्त्यो पुती भर्खर पुटुस्स उठेको पुती मलाइ पागल नै बनायो मैले उसको पुती करीब १० मिनेट चाटिदिएँ । उ आँखा चिम्लिएर आ…………………. आ………….. ……… उ………………..स………………….. गर्न थाली र भनी कति कुराएको अब त नकुराउ म कुर्न सक्दिन भनी र मेरो लाडो झिकेर खेलाउन थाली मलाइ पनि अचाक्ली भयो र उसको मुख नजिकै लगेर मेरो लाडो राखिदिएँ । उसले मज्जाले चुस्न थाली र मलाइ पुरा विश्वास भयो कि यो उसको पहिलो सेक्स अनुभव होइन भनेर मलाइ पनि सार्है आनन्द आयो र अब झर्लाजस्तो भयो मैले थाम्नै सकिन उसको मुखमै मेरो भाइले छादिदियो उसले मज्जाले चुसेर सफा बनाइदिइ र मैले उसलाइ आफ्नो माथी राखे र उसको
फेरी चाट्न थाले। उसले पनि मेरो लाडो चुस्न छोडिन र करिब ५ मिनेट पछि मेरो लाडो पुन जुर्मुरायो र फुल्न थाल्यो त्यसपछि मैले उसको पुती भित्र छिराउन प्रयाश गरेँ । उसको पहिला देखिनै पुती पानी बगेर चिप्लो भइराखेको थियो ।
मेरो लाडो ५ इन्च लामो भएपनि सार्है मोटो छ । त्यही भएर आधी मात्र छिर्यो उसलाइ सार्है पिडा भएछ क्यार अइया…………………………ऒ………. …….उफ्………………………………… गरी मैले त्यसपछि उसको दुधको मुन्टा फेरी चुस्न थाले एकछिन पछि उसैले मेरो कम्मरमा समातेर तानेर बाँकी
पनि पुर्रै भित्र छिराइ र मैले बिस्तार भित्र – बाहिर गर्न थाले उ पनि आनन्द मानेर हल्लिन थाली । र १० मिनेट पछि म झर्न लागे र स्पिड बडाए र उसले भनि बाहिर फाल्नु है भनी र मैले हुन्छ भनेर उसको भुडी भरी झारिदिएँ । उसले पछि फेरी चुसेर मेरो लाडो सफा पारिदिइ । र उसलाइ अंगालो हालेर ५ मिनट जति सुतिरह्यौ
यु आर नो मोर भर्जिन
भाइब्रेटोर् ले उसको यौनांग